Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha HAAB oo lagu soo dhaweeyay shirka jaaliyadda Kansas
Gudoomiyaha HAAB oo lagu soo dhaweeyay shirka jaaliyadda Kansas
Hogaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada ee JWXO (HAAB) Mudane Maxamed Cabdi Yaassin iyo wafti uu hogaaminayo ayaa maanta shir hawleed layeeshay jaaliyada Ogaadeeniya ee ku nool magaalada Kansas city ee gobolka Missouri.
Shirka waxaa kasoo qaybgaley dadweyne badan oo katirsan jaaliyada S.Ogaadeeniya ee ku nool gobolka Missuri halkaasoo uu Mudane Diirane ka jeediyey warbixin dheer oo ku saabsan xaalada dhabta ah ee uu ku suganyahay shacabka reer Ogaadeeniya. Wuxuu sidoo kale Hogaanku ka warbixiyey heerka uu maanta marayo halganka ay JWXO hormuudka ka tahey iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo marey iyo waliba sababihii uu u bilowday.
Warbixinta ka dib ayuu wuxuu mudanuhu dhegeystey aragtida iyo dareenkii dadweynaha isaga oo uga jawaabey wixii su’aalo ahaa ee ay waydiiyeen. Dhanka kalana wuxuu Hogaanku halkaas kasoo jeeyey cashir seminaar ah oo uu kaga hadlayo nidaamka maamulka iyo waxa ay tahay Ururnimadu taas oo korloogu qaadayo tayada howlwadeenada jaaliyadaha. Cashirkan aqoon korodhsiga ah oo qayb-weyn ka ahaa socdalka gudoomiyaha HAAB ayuu si qodo dheer ugu nuux nuuxsadey diyaarintiisa iyo soo bandhigidiisaba iyada oo ay aad ula dheceen seminaarkas xubnihii dhegeysanyey. ugu dambeyntiina Hogaanka ayaa beri u ambabixidoona gobolada kale ee uuna wali marin halkaasna ka siiwadi doona howla kormeerka hadii eebe idmo.
Shirkan oo ku soo dhamaaday jawi aad u qurux badan ayaa wuxuu qayb ka yahay kormeer guud oo uu Godoomiyuhu ka wado guud ahaan wadanka Mareykanka gaar ahaan goobaha ay jaaliyadaha Ogadeeniya ku noolyihiin.
instead of calling or saying ” Guddoomiyaha Haab’ Maxaad u odhan la`dihiin ” Madaxa Arrimaha Abaabulka” pleaase Ha daba-soconina Qaabka Kilika!!